जो नेस्बेबाट नयाँ के छ। शरद Inतुमा वारस र ... फर्कन्छ Harry Hole | वर्तमान साहित्य
जो नेस्बेको फोटो: (c) डेब्रा हर्डफोर्ड ब्राउन।
को वफादारको व्यापक पार्सी जो नेस्बे अझै यो भाग्य मा। अप्रिल मा हामी थियो Macbeth र भित्र अक्टोबर बिक्री मा जान्छ उत्तराधिकारी (सम्पादकको अनुवाद-निर्णय - मूल शीर्षक को लागी धेरै नि: शुल्क। Sonnen, छोरा जत्तिकै सजिलो)। म उसको दिनमा यो पढ्छु र म अब देखि यो सिफारिश गर्दछ.
र अर्को वर्ष, मा julio, फायरप्रूफ रिटर्न (किनकि यसले केवल जलाउनु पर्छ) आयुक्त ह्यारी प्वाल यसको बाह्रौं कथामा, चाकू (म अनुवाद गर्न हिम्मत गर्दिन, त्यसो भए के हुन्छ, तर अहिले र शाब्दिक रूपमा यो हुन्छ चाकू)। हेरौं तिनीहरू के को बारेमा छन्? यस जोडी समाचार र आशा छ कि उनीहरू चाँडै नै नेस्बेबाट बाँकी रहेका अन्य दुई उपन्यासहरू प्रकाशित गर्नेछन्: हिउँमा रगत y मध्यरातको सुर्य.
Actualidad Literatura का नियमित पाठकहरू मेरो बारेमा पहिले नै थाहा हुनुपर्दछ पौष्टिक र गहन प्रेम कथा यस viking पट्टी संग, उनी एक वित्तीय शार्क थिए, एक सफल रोकर (उनले आफ्नो ग्रीष्म thoseतुमा सबै गर्मीमा बोल्दै आएका छन्) र अपराध उपन्यासका मालिक। त्यसोभए यो कुरा निश्चित छ कि आश्चर्यजनक छैन जब मैले उसको बारेमा कुरा गर्दा म मेरो वस्तुस्थिति गुमाउँछु। त्यहाँ तिनीहरू जान्छन् के आउँदैछ र के हराइरहेको छ त्यसको मेरो प्रभावहरू.
1.1 यसको बारेमा के हो?
1.2 मैले के फेला
3 त्यसो भए…
अर्को एक बिक्री मा जान्छ अक्टोबरको लागि 11 र पछि दोस्रो स्वतन्त्र उपन्यास हो हेडहन्टर। यो प्रकाशित भएको थियो 2014, त्यसैले यो समय को बारे मा म यो तरीका थियो। के शीर्षक अनुवाद मैले यसमा पहिले नै टिप्पणी गरिसकें। कहिलेकाँही सम्पादकहरूले मूल परिवर्तन गर्ने निर्णयहरू हास्यास्पद हुन्छन्, जुन एक लेखक माथि निर्भर हुन्छ, कसलाई के मापदण्ड थाहा छ को लागी। थप रूपमा, नेस्बेसँग अहिले सम्म उनीहरू आफ्नो मूल शीर्षक सम्मान थियो। जे भए पनि ...
नायक हो Sonny lofthus। उहाँ तीस वर्षमा हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनको अन्तिम बाह्र वर्ष बित्नुभयो उनले अपराध नगरेको कारण जेलमा थिए। ऊ पछि हेरोइनको लतमा छ उनका बुबाले आत्महत्या गर्ने निर्णय गरे उनी एक भ्रष्ट पुलिसको रूपमा बाहिर पठाइनु भन्दा पहिले। सनी समस्यामा पर्‍यो र जेलमा छिन्।
त्यहाँ यो एक हुन्छ गुरू वा कन्फाइजर को प्रकार अन्य कैदीहरूको, तर ऊ धेरैको ध्यान केन्द्रित पनि छ: अधिकारीहरू र वार्डन, प्रहरी, वकिलहरू ... र सबै उनी जेलमै रहन चाहन्छन्। र सबैभन्दा माथि, ओस्लोमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अपराध स्वामी।
तर एकदिन एक जना कैदीले सोनीलाई भन्यो केहि धेरै महत्त्वपूर्ण उनको बुबाको मृत्युको बारेमा। त्यसोभए सनीले त्यो निर्णय गर्छ भाग्नु पर्छ जे सुकै होस्। र उसले ती मध्येका एक एपिसोडमा गर्नेछ जुन असम्भव देखिन्छ र नेस्बे घरको ट्रेडमार्क हो। त्यसोभए खोजीको बारेमा सोच्नुहोस् बदला कुनै पनि मूल्यमा, भूमिगत देखि उच्च-स्तरको कानून प्रवर्तनसम्म, साथै वास्तवमा के भयो भनेर थप अनुसन्धान गर्दै। तर उनीहरू पनि उसलाई सताउँछन्। तिनीहरूको बाटोमा तिनीहरू पार हुनेछन् साइमन केफस, एक बुजुर्ग पुलिस जो सोनीको बारेमा बढी सत्य जान्दछ, र एक केटी को माया यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
मैले के फेला
सधैं हुन्छन् misgivings सबैभन्दा समर्पित र समर्पित पाठकहरूको जब एक चरित्र श्रृंखला को साथ भारी लेखक सफल तेस्रो परिवर्तन गर्नुहोस् र अन्य कथाहरूको साथ हावा। नेस्बेलाई त्यस्तै हुन्छ। उहाँको ह्यारी होल एक रचना हो धेरै ठुलो र गोलो कि यो पहिले नै पार गरिसकिएको छ र त्यो ओभरशेडो हो (र सम्भवतः ओभरशेडो हुनेछ, नेस्बेले चाहेको होस् या नहोस्) मैले लेखेको अरू केहि।
यो संग भयो हेडहन्टर (पहिलो व्यक्तिलाई कथाको स्वर परिवर्तन, खास जस्तो मौलिक कहानी, एकदम फरक पात्र ...)। र यो फेरि संग भएको छ Macbeth, que आफ्नो विश्वासी विभाजित छ विरोधाभासपूर्ण रायमा। यो बुझिन्छ तर पक्कै पनि म्याकबेथ म्याकबेथ हुन् र नेस्बेले कुनै पनि आविष्कार गरेका छैनन्, उनले केवल आफ्नै तरिकाले बताइन। यो संग फेरि हुन सक्छ उत्तराधिकारी र ती अझै प्रकाशित गर्न बाँकी छ, धेरै छोटो कथाहरू र अराजक नर्वेजियन पुलिस तारांकितका मानिस भन्दा एकदम फरक।
म त्यो मात्र भन्न सक्छु उत्तराधिकारी मलाई मन पर्योम तिनीहरूलाई कसरी मन पराउँछु हेडहन्टर, हिउँमा रगत y मध्यरातको सुर्य। मलाई अर्को के लाग्यो नेस्बे घर को शैली मा महान कहानी। यसको ट्विस्टको साथ, मानिसजाति उनको चरित्र को, यसको प्लाटको समिकरण र गहिरो रोमान्टिकवाद त्यो सबै कुरा अन्तर्निहित गर्दछ। हो, ह्यारी त्यहाँ छैन, तर यो आवश्यक छैन। उहाँपट्टि जीवन छ, त्यहाँ अरू कथाहरू छन्। र तिनीहरू यसको लायक छन् किनकि तिनीहरू नेस्बेका हुन्।
साथै, र विनम्र रूपमा म लेखकको दृष्टिकोणबाट बोल्न सक्छु, समय-समयमा हामीले चिप परिवर्तन गर्न, नयाँ जीवहरूको कल्पना गर्न र नयाँ संसारहरू सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ। तर यो पनि सत्य छ हामी सँधै मनपर्न सक्दैनौं र हामी निराश पनि हुन सक्छौं। प्रश्न यो हो कि हामी यसलाई ग्रहण गर्दछौं। र यी स्थापित लेखकहरूको यो अनुमानित भन्दा बढी छ। अवश्य पनि, यस मानिससँग मसँग यो स्पष्ट छ।
तर ठीक छ, कसैलाई चिन्ता छैन। हो, ऊ फर्कन्छ, हाम्रो सबैभन्दा जटिल लत, हाम्रो आफ्नै जिम बीम: हैरी। र यो यस संग हुनेछ चाकू। जे होस्, यदि उनीहरूले अघिल्लोसँग जस्तै गरे, भने शीर्षक हुन्छ छेउ, काट o चक्कु.
तपाईं ठिक हुनुहुन्छ। गत जुलाई नेस्बेले घोषणा गर्‍यो कि बाह्रौं ह्यारी होल उपन्यास बाहिर हुनेछ 11 डी julio de 2019। स्पष्ट रूपमा, सुरूमा हामी ह्यारी एक संग ब्यूँतिरहेका भेट्टायौं भयानक ह्या hangओभर र रगत कभर हात र कपडा। समस्या परेको छ, होललाई चिनेको भए पनि, उहाँ अब सबैभन्दा खराबमा पुग्ने कुरामा हामी छक्क पर्दैनौं। अब यस विषयलाई हेर्ने हो भने नेस्बेले यस प्राणीलाई यति धेरै अत्याचार गरिसकेपछि कति टाढा जान्छ (फेरि)।
तथ्य यो हो कि उपन्यास पनि फिर्ता ल्याउँदछ Harry को पुरानो र घातक दुश्मन। यो अविश्वसनीय देखिन्छ कि उसले आफूसँग पहिले नै बाँकी रहेका कुनै पनी छोडेको छ। तर नेस्बेलाई छुट्याउने त्यो शैतानी र विरक्त मनले पक्कै पनि उसको लागि सबैभन्दा खराब सिर्जना गर्न जारी राख्नेछ। यद्यपि हामी मध्ये जो यस निराश अपूर्ण सिपाहीलाई राम्ररी जान्दछौ, उसको कालो प्रतिद्वन्द्वी सँधै आफैं नै हुन्छ.
केहि छैन, पर्खनु र Nesbø पढ्न जारी राख्न। कुनै शंका बिना, निराशाको डर बिना, पूर्वाग्रह बिना। थप रूपमा, यो सबै भन्दा राम्रो विचार गठन गर्न सबै भन्दा राम्रो हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » जो नेस्बेबाट नयाँ के छ। शरद Inतुमा वारिस र ... ह्यारी होल फिर्ता हुनेछ
२१ औं शताब्दीका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू